အကယျဒမီ ဒျေါနှဲ့နှဲ့စနျးရဲ့ ဝမျးသာစရာ ကနျြးမာရေးအခွအေနေ – စှယျစုံသုတ
အနုပညာလောကထဲမှာ သကျတနျးရငျ့ဝါရငျ့သရုပျဆောငျမြားစှာရှိကွတဲ့အထဲမှာတော့ အကယျဒမီသရုပျဆောငျဒျေါနှဲ့နှဲ့စနျးဆိုရငျတော့ လူကွီးလူငယျမသိတဲ့လူ မရှိလောကျပါဘူးနျော..အမနှေဲ့စနျးက ငယျငယျကတညျးက ဝါသနာပါလို့အနုပညာလောကထဲကို ဝငျရောကျလာခဲ့တာကနေ အကယျဒမီရရှိပွီးသညျအထိ
ဆကျလကျလုပျဆောငျနတောဖွဈပါတယျ။ ခုလိုမွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈနတေဲ့ ကိုဗဈရောဂါတှကွေောငျ့လညျး အနုပညာလောကသားတှအေပါအဝငျ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတှကေိုလညျး မြားစှာဆုံးရှုံးနရေပွီဖွဈပါတယျ။ မိသားစုတိုငျးကတော့ ခုခြိနျမှာအလိုအပျဆုံးကတော့ အောကျဆီဂငျြလို့ ပွောရမလိုဖွဈနပေါပွီနျော.
နရေ့ကျတိုငျး အခြိနျတိုငျးမှာ အောကျဆီဂငျြမရရှိနိငျလို့ အသကျမြားစှာကိုဆုံးရှုံးနရေပွီ ဖွဈပါတယျ. လှနျခဲ့တဲ့ ရကျအနညျးငယျတုနျးကတော့ အမနှေဲ့က ကနျြးမာရေးမကောငျးတာကွောငျ့ အငျးတိုငျဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနရေတယျလို့ သိရပါတယျ။ အသကျအရှယျလညျး ရနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ ဆေးကုသမှု
ခံယူရမှာ စိုးရိမျရတယျလို့ သိရပွီးနောကျ ဒီနလေ့ေးမှာတော့ အမေ ဒျေါနှဲ့နှဲ့စနျးကတော့လကျရှိမှာကိုဗဈရောဂါ ကူးစကျခံခဲ့ရပွီး ခုခြိနျမှာတော့ ရောဂါသကျသာလာပွီး မကွာခငျလုံးဝပြောကျကငျးပွီးအိမျပွနျနိုငျတော့မှာလညျးဖွဈပါတယျ။
ပရိတျသတျတှေ ပို့သပေးတဲ့ မတ်ေတာတှကွေောငျ့ ခုလို အနျတီနှဲ့နှဲ့စနျးကိုဗဈရောဂါကိုအနိုငျတိုကျထုတျနိုငျပွီး သကျသာလာတဲ့အတှကျ မြားစှာဝမျးမွောကျဝမျးသာဖွဈရပါတယျ။Weekly Myanmar ပရိသတျကွီးလညျး ကိုယျကိုတိုငျ ကနျြးမာရေးကိုဂရုစိုကျနထေိုငျကွပါနျော..
အနုပညာလောကထဲမှာ သက်တန်းရင့်ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်များစွာရှိကြတဲ့အထဲမှာတော့ အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင်ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်းဆိုရင်တော့ လူကြီးလူငယ်မသိတဲ့လူ မရှိလောက်ပါဘူးနော်..အမေနွဲ့စန်းက ငယ်ငယ်ကတည်းက ဝါသနာပါလို့အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တာကနေ အကယ်ဒမီရရှိပြီးသည်အထိဆ
က်လက်လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခုလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါတွေကြောင့်လည်း အနုပညာလောကသားတွေအပါအဝင် သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေကိုလည်း များစွာဆုံးရှုံးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုတိုင်းကတော့ ခုချိန်မှာအလိုအပ်ဆုံးကတော့ အောက်ဆီဂျင်လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပါပြီနော်.
နေ့ရက်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာ အောက်ဆီဂျင်မရရှိနိင်လို့ အသက်များစွာကိုဆုံးရှုံးနေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်. လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်တုန်းကတော့ အမေနွဲ့က ကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့် အင်းတိုင်ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အသက်အရွယ်လည်း ရနေပြီဖြစ်တာကြောင့် ဆေးကုသမှုခံယူရမှာ စိုးရိမ်ရတယ်လို့ သိရပြီးနောက် ဒီနေ့လေးမှာတော့ အမေ ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်းကတော့လက်ရှိမှာကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး ခုချိန်မှာတော့ ရောဂါသက်သာလာပြီး မကြာခင်လုံးဝပျောက်ကင်းပြီးအိမ်ပြန်နိုင်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပရိတ်သတ်တွေ ပို့သပေးတဲ့ မေတ္တာတွေကြောင့် ခုလို အန်တီနွဲ့နွဲ့စန်းကိုဗစ်ရောဂါကိုအနိုင်တိုက်ထုတ်နိုင်ပြီးသက်သာလာတဲ့အတွက် များစွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်။Weekly Myanmar ပရိသတ်ကြီးလည်း ကိုယ်ကိုတိုင် ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်နေထိုင်ကြပါနော်..